IndyStar.com bụ Central Indiana si Nke 1 online akụ maka ozi ọma na ozi, na-anata ihe karịrị nde 30 echiche echiche, 2.4 nde ndị ọbịa pụrụ iche na nleta nde 4.7 kwa ọnwa.
N'iji ihe nlele ulo nke US comScore dika isi, a huru ihe di iche iche kuki abuo na abuo na komputa nke Yahoo! Nchọpụta a na-egosi na, n'ihi nhichapụ kuki, sistemụ ihe nkesa na-arụ ọrụ nke na-eji kuki iji tụọ nha nke ntọala ndị ọbịa na saịtị ahụ ga-emekarị ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa pụrụ iche karịa ihe 2.5x, nke bụ ịsị overstatement nke ruru 2.5 percent. N'otu aka ahụ, ọmụmụ ahụ chọpụtara na sistemụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eji kuki iji chọpụta njedebe na ugboro ole mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị ga-emebiga ihe ókè site na ihe ruru ihe ruru 150x na oge na-erughị ogo n'otu ogo. Actualdị oke okwu nke oke okwu na-adabere ugboro ole ị gara na saịtị ma ọ bụ na-ekpughere mgbasa ozi.
Enwere ike! Were saịtị dịka saịtị akụkọ mpaghara ahụ na ọnụọgụ ọnụọgụgụ 2.4 na-adaba ozugbo n'okpuru nde ndị ọbịa. Saịtị saịtị bụ saịtị a na-agakarị, yabụ na ọnụọgụgụ ahụ nwere ike ịdị ala karịa nke ahụ. Ugbu a tinye ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ na-eleta saịtị ahụ n'ụlọ na ọrụ ma ị na-ahapụ nọmba ahụ ọzọ dị mkpa.
Nke a bụ nsogbu nye ochie 'eyeballs' ìgwè mmadụ. Ọ bụ ezie na ndị ahịa na-ere ahịa mgbe niile site na ọnụọgụ, weebụsaịtị ha nwere ike ịnwe ndị ọbịa pere mpe karịa ndị na-asọ mpi. N'ezie, ọ nweghị ụzọ dị mma iji 'dozie' okwu ahụ. Ọ bụ ezie na onye ọrụ weebụ ọ bụla nwere ọkara ụbụrụ na-achọpụta na nke a bụ ikpe, anaghị m anwa ikwu na saịtị na-ebubata ọnụ ọgụgụ ha na-enweghị isi. Ha anaghị ekwufe ọnụ ọgụgụ ha na ebumnuche… ha na-akọ akụkọ ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ. Ọnụ ọgụgụ na-eme ka a ghara ịdabere na ya.